ဆုံဆည်းရာ: ယနေ့ သတင်း (၁၃ ရက် ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၁၀)
ယနေ့ သတင်း (၁၃ ရက် ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၁၀)
ဆုံဆည်းရာ၊ ၁၃ ရက် ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၁၀
ညနေ (၄ နာရီ ၃၀ မိနစ်) ကရင်ပြည်နယ် မြ၀တီမြို့ ကီလိုမီတာ ၂၀ အကွာမှာရှိတဲ့ စူးကလိရွာအထက် ကွိတာအု အနီးတွင် နအဖ စစ်ကူလာသည့် တပ်များကို ယနေ့နေ့လည်ပိုင်း ၁ နာရီခွဲက ဒီကေဘီအေအဖွဲ့မှ ခြုံခိုတိုက်ခိုက်သဖြင့် နအဖ စစ်သား အချို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရမှုများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။
ညနေ (၄ နာရီ ၂၀ မိနစ်) ယနေ့နေ့လည်ပိုင်း ၁ နာရီ ၁၀ မိနစ်က မာနယ်ပလောနယ်ဒေသတွင် ကေအန်ယူနဲ့ နအဖ တပ်များ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
ညနေ (၄ နာရီ်) မြ၀တီမြို့နယ် ဝေါလေဒေသတွင် နအဖ အခြေစိုက်စခန်းကို ဒီကေဘီအေမှ ယနေ့နေ့လည် ၁ နာရီလောက်က ၀င်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။
Posted by ဆုံဆည်းရာ at 4:56 PM
nice job soneseayar team. you gay are the best. keep it
why don't tha other ethnic group fiht the spdc